हस्तमैथुन के हो ? गर्ने की नगर्ने ? तथ्य र भर्म …! - Nepal News - Latest News from Nepal
काठमाडौं । आफ्नो यौनांग चलाई यौन आनन्द लिने क्रियालाई हस्तमैथुन भनिन्छ । त्यसो त संस्कृत भाषामा हस्तको अर्थ हात र मैथुनको अर्थ यौनकार्य भन्ने बुझिन्छ । प्रायः हातको प्रयोग गरिए पनि यसका लागि विभिन्न वस्तु, साधन वा खेलौना (सेक्स टोइज) पनि प्रयोग गर्न थालिएको छ । चाँडै र सजिलै सिक्ने भएकाले किशोरहरूलाई हस्तमैथुनको लत लाग्छ । विश्वमा ९० प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिलाले हस्तमैथुन गर्ने गरेका छन् । हस्तमैथुन गर्नाले मुखमा दाग आउने, आँखा कमजोर हुने, दुब्लाउने, नपुंसक हुने, शीघ्र पतन हुने, विवाहपछि यौन सन्तुष्टि नमिल्ने भ्रम छन् । हस्तमैथुन यति नै पटक गर्न मिल्छ भन्ने यकिन छैन । यो व्यक्ति विशेषको यौनेच्छामा भर पर्छ । यौनेच्छा शान्त पार्न मद्दत गर्ने वैकल्पिक बाटो हस्तमैथुन प्राकृतिक कुरा हो । यसलाई पापकर्म मान्नुहुदैन ।
हस्त मैथुन सम्बन्धी नेपाली युवा–युवतीको प्रस्ट तथ्यांक नभए पनि अनौपचारिक स्रोतका अनुसार नेपालको वस्तुस्थिति पनि खासै फरक चाहिँ छैन । युवतीले खुलेर भन्न नचाहने अर्थात् लजाउने कारण हस्त मैथुन गर्नेको संख्या वास्तविकताभन्दा कम देखिन सक्छ ।
हस्त मैथुन गरेर पछुताउनुभन्दा हस्त मैथुन गर्ने बानीलाई नियन्त्रणमा राख्नु चाहिँ राम्रो हो । हस्त मैथुन गर्ने युवायुवती अन्ततः मानसिक रूपमा आफूलाई कमजोर महसुस गर्ने हुन सक्छन् । चिन्ता लिने हुनसक्छन् । बरू, हस्त मैथुनको क्रियालाई नै नियन्त्रणमा लिएर यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । प्रायःजसो एक्लै बसेको अवस्थामा, यौनजन्य पत्रपत्रिका पढेको तथा चलचित्र हेरेको अवस्थामा, यौनबारे सोच्ने गरेको अवस्थामा हस्त मैथुन गर्न बल पुग्छ । त्यसैले सकेसम्म एकान्त ठाउँमा बस्ने गर्नु हुँदैन भने यौन उत्तेजना बढाउने पत्रपत्रिका पढ्न तथा चलचित्र हेर्न कम गर्नु पर्दछ ।
हस्त मैथुन गर्न मन लाग्ने बित्तिकै हल्का घुमघाममा निस्कने तथा मानिसहरूको चहलपहलमा मिसिने हो भने त्यो रहर त्यसै सेलाउँछ । पढाइ वा आफ्नो व्यवसाय बेगरको फुर्सदिलो समयलाई रचनात्मक काम एवं खेलकुदमा लगाउनुपर्दछ । तर, यौन तनाव जबरजस्ती दबाउन खोज्यो वा यौन तनावबाट मुक्त हुने कुनै उपाय अपनाएन भने स्वप्न दोषका रूपमा पनि शरीरमा सञ्चित वीर्य बाहिरिन्छ । मुख्य कुरा, युवायुवतीले के बुझ्नु जरुरी छ भने, हस्त मैथुन आफैँमा त्यस्तो खराब होइन तर हस्त मैथुन गरेर मानसिक रूपमा विभिन्न भ्रम पाल्नु चाहिँ हानीकारक हुन सक्छ ।